ဇွန်သဉ္ဇာ ဂိတ်…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Celebrity » ဇွန်သဉ္ဇာ ဂိတ်…။	55
Posted by black chaw on Mar 19, 2015 in Celebrity, Creative Writing, Education, Think Different | 55 comments
ကျွန်တော်တို့ ရွာသူား တွေ ကြားမှာ အမြင်မတူကြပြန်တဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုက ပေါ်လာ ပြန်ပါတယ်။
သမ္မတကြီးရဲ့ ပညာတော်သင်ဆု ရွေးချယ်ပွဲမှာ ရေးဖြေအောင်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ဇွန်သဉ္ဇာ ကိစ္စပါ။
မိတ်ဆွေများ သိပြီးဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်း ဇွန်သဉ္ဇာ ဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ
Facebook မှာလည်း သူမရဲ့ ၀င်းလက်တောက်ပြောင်နေတဲ့ တင်တွေ ရင်တွေ အလှကို
သူမကိုယ်တိုင် တင်ပေးနေလို့ ကျွန်တော်တို့ အားပေးခဲ့ကြဖူးပါပြီ။
အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ဇွန်သဉ္ဇာ တစ်ယောက် သမ္မတကြီး ရဲ့ ပညာတော်သင်ဆုရွေးချယ်
ပွဲမှာ ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်သွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းက ဗုံးတစ်လုံးလို ၀ုန်း ကနဲ ပေါက်ကွဲပါတော့တယ်။
ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲမှာလည်း အုပ်စု ၂ စု ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။
တစ်စုက အဖေါ်အချွတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့ ဆက်စီမော်ဒယ်ကို ပညာတော်သင်ဆု မပေးသင့်ဘူး။
တစ်စုက ဆက်စီမော်ဒယ်ဆိုပေမယ့် ပညာတော်ရင်တော့ ပညာတော်သင်ဆု ပေးသင့်တာပေါ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ။
ရွာထဲက မိတ်ဆွေလေး တစ်ယောက်က ဦးဘလက် အမြင်က ဘယ်လိုလဲ လို့ မေးလာပါတယ်။
ကျောင်းသားသပိတ် ကိစ္စတုန်းက ကြားနေခဲ့ပေမယ့် ဇွန်သဉ္ဇာ ကိစ္စမှာတော့ ကြားမနေစေချင်တဲ့ သဘော။
ကြားနေတာတွေ သိတ်များလာရင် မကောင်းတော့တာမို့ တစ်ဘက်ဘက်ကို ရွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ မေးခွန်းကို ဖြေဖို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးလိုက်ရခြင်းရယ်ပါ ကျောင်းဒကာ ကျောင်းအစ်မ
ရွာတော်သူ ရွာတော်သား သူတော်ကောင်း အပေါင်းတို့ရေ။
ဘလက်ချော ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်
ဇွန်သဉ္ဇာ ဟာ အဖေါ်အချွတ်ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့ရုံနဲ့တော့ဖြင့်
သမ္မတကြီးရဲ့ ပညာတော်သင်ဆုနဲ့ မသင့်လျော်ပါဘူးလို့ တစ်ထစ်ချ မပြောလိုပါ။
လတ်တလော မီဒီယာတချို့မှတစ်ဆင့် ဇွန်သဉ္ဇာ အင်တာဗျူးတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး
ပညာသင်ဆု ပေးသင့် မပေးသင့် စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ မပေးသင့်ဘူးလို့ တွေးမိလာပါတယ်။
ကျွန်တော့်အမြင်အရ ဇွန်သဉ္ဇာ အခုလို အဖေါ်အချွတ်ပုံတွေ ရိုက်ပြီးတင်နေတာကို မိဘတွေ အနေနဲ့
စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ပြောမရဆိုမရလို့သာ လွှတ်ထားရပုံရပါတယ်။
သူမမှာ အရည်အချင်း ရှိတာကို သိထားတဲ့ မိဘတွေအနေနဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ ပညာတော်သင်ဆု ရွေးချယ်ပွဲကို
၀င်ရောက်ဖြေဆိုခိုင်းပြီး အရွေးအချယ်ခံလိုက်ရရင် ဖေါ်ချွတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့ လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားမလားဆို
တဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ၀င်ဖြေခိုင်းလိုက်တယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။ အထင်မို့
မှားနိုင်ပါတယ်နော်။ အဲဒါကို Tomorrow ဂျာနယ်ထဲက အင်တာဗျူးမှာ ဇွန်သဉ္ဇာ ဖြေသွားတာကို ကြည့်ပြီး
အမေက ကိုယ့်အရည်အချင်းလည်း သိရတယ် ဆိုလို့ အမေ့ဆန္ဒအလျောက်သာ ၀င်ဖြေခဲ့တာပါ။
အခု အချိန်မှာ စကောလားရှစ်အတွက် အဆင့်တစ်ဆင့် အောင်ပေမယ့် ကျန်ရှိနေတဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ကို
ကြိုးစားရဦးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူတွေ့ပါ အောင်သွားခဲ့မှပဲ ဘယ်လမ်းကြောင်းကို လုပ်သင့် မလုပ်သင့်
သူမအနေနဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့လည်း လိုချင်သလို အနုပညာလမ်းကြောင်းမှလည်း စွန့်ခွာလိုခြင်းမရှိကာ ဒွိဟ
ဆိုတော့ ဇွန်သဉ္ဇာ သည် ပညာတော်သင်ဆု အတွက် အရွေးချယ်ခံရသည့်တိုင် လက်ခံရယူမည်
မယူမည်ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ရသေးဟန်မတူပါ။ အမေ ဖြစ်သူ၏ ဆန္ဒ အရသာ ၀င်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ဟန်တူပါ
နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသွားသင်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု အနေနဲ့ ကိုယ့်ကို လူမှုကွန်ရက်
ကနေ လူသိများလာတာဆိုတော့ ဟို နိုင်ငံရောက်ရင် ပုံတွေကတော့ အမြဲတင်လို့ ရပေမယ့် ကားရိုက်တာမျိုး
နယ်ရှိုးတွေ မလိုက်ဖြစ်နိုင်တာမျိုး ဖြစ်နေတော့ ပရိသတ်နဲ့ ကင်းကွာသွားမှာလည်း စိုးတယ်။ အနုပညာ အလုပ်
က ရန်ကုန်မှာ ရှိနေရင် ပိုအဆင်ပြေပြီး Facebook ပေါ်မှာပဲ ဆိုရင် သိပ်မထိရောက်ဘူးလို့ ထင်မိလို့ ခုချိန်မှာ
စဉ်းစားစရာကောင်းတာက ပညာတော်သင်ဆုရသွားခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားသွားပြီး ပညာဆက်လက်သင်ကြားခဲ့ရင်
တောင် အခုလို ပုံမျိုးတွေ ဆက်တင်နေဦးမယ့် သဘောမျိုး တွေ့ရပါတယ်။
အမေရိကားက ကမ္ဘာကျော်တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုမှာ တက်နေတဲ့ မြန်မာမလေးတစ်ယောက်
က အခုလိုပုံတွေ တင်နေရင် နိုင်ငံ သိက္ခာကျသွားမလား။ ကျွန်တော် မဆုံးဖြတ်ဘူးနော်။
ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ပါ။
နောက်အင်တာဗျူးတစ်ခုက ပေါ်ပြူလာ နယူးစ် ထဲမှာပါခဲ့တာပါ။
ဓါတ်ပုံဆရာတွေလည်း တကယ်လို့ မရိုက်ပေးဘူး ပြောလာရင်လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရိုက်ဖို့
ဇွန်သဉ္ဇာ ဟာ ဒီ အဖေါ်အချွတ်ပုံတွေ ရိုက်ပြီး တင်လို့ လူသိများတာကိုပဲ သာယာမှုလွန်ကဲနေပုံရပါတယ်။
၁။ သမ္မတကြီးရဲ့ ပညာတော်သင်ဆုကို အမေ့ဆန္ဒအရသာ လျှောက်ခဲ့တာသာ ဖြစ်ပြီး အရွေးချယ်ခံရရင်လည်း
ပညာဆက်လက်သင်ကြားမယ် မသင်ကြားမယ် မဆုံးဖြတ်ရသေးတဲ့အတွက် မရွေးသင့်။
၂။ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသွားသင်ခဲ့ရင်တောင် ဒီလို ပုံတွေ ရိုက်တင်နေဦးမယ် (ဆိုရင်) လုံးဝ မရွေးသင့်။
ဆန့်ကျင်ဘက် အနေနဲ့ ပြန်စဉ်းစားရင်…
သူ့ဟာသူ သူပိုင်တဲ့ တင်တွေရင်တွေ ဖေါ်ပြီးဓါတ်ပုံရိုက်တာ ဘယ်သူ့ကို စော်ကားနေလို့လဲ။
သင့်တော်သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ရင် ရွေးကိုရွေးရမှာပဲ ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။
အဲသလို ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် မျိုးကြီးလည်း မလျှောက်တတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ..။
ဇွန်သဉ္ဇာကရော အရွေးခံခဲ့ရရင် နိုင်ငံခြားမှာ ပညာဆက်လက်သွားသင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးပြီလား???
ခင်ဇော် says: ပညာရေး အဆင့်မြှင့်ဖို့ တောင်းတဲ့ ကျောင်းသားသပိတ်ကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပြီး
ဂျွန်တင်ဂျာလေးကို စကောလာ ပေးရတာတော့ ဘယ်လွယ်မလဲ။
တို့တမဒဂျီး အတက်ကျော် ရာကျော်ရှည်ပါဇီ!!!!
တညား တဘောထားက ဟိုဘက်မှာ ပြောပြီးပြီမို့ ဒီမှာ ပြောတော့ဝူးးး
အဲဒီ စကော်လာ စားရိတ်က နိုင်ငံတော်လား ??
ကိုယ်ပိုင်ငွေထဲကလား ?? သေချာသိချင်တယ်။
နို့မို့ ကျောင်းထားစရိတ်ပါ အကြွေးထဲ တိုးမစိုးလို့။
Mr. MarGa says: ပြောပြီးပြီဗျာ
ကျနော် ကွန်ဆာဗေးတစ် စစ်စစ်ပါ လို့
အမေ လူထုဒေါ်အမာရေ စာဝတိံသာကနေ ပြန်လာကြည့်လှည့်ပါဦး…………
ခင်ဇော် says: တမဒဂျီး ပလိတ်သတ်တွေကတော့
အရင် ကွန်ဆာဘေးတစ်တွေက ဒီ ကိစ္စမှာ လစ်ဗျဲ ဖြစ်ကုန်ကြဘီ။
နိုင်ငံခြားမှာ နှစ်ရှည်လများနေပြီး မြန်မာ့ ဝတ်စားဆင်ယင် ယဉ်ကျေးမှုကို ခုထိ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို စော်ကားမော်ကားပြောတဲ့သူတွေလေ ……
တမဒဂျီး က ဒါဂျီး ရွေးရင်ကျ ကောင်းသတဲ့ အရပ်ကတို့။
Ma Ma says: ထောက်ခံပါ၏။
ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
မမက ဘာကို ထောက်ခံတာလဲဟင်…။
ဇွန်သဉ္ဇာ အရွေးခံရတာကို ထောက်ခံတာလား…။
ဇွန်သဉ္ဇာ အရွေးခံဖို့ မသင့်ဘူးဆိုတာ ထောက်ခံတာလား…။
Mr. MarGa says: လူကိုမကြည့်ဘဲ မူနဲ့ပဲရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးရယ်
ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာ အဲ့လို အခြေအနေကို အတော်များများ လက်ခံနိုင်မယ်မထင်
သဘောတူချင်ရင် နိုင်ငံတကာစံနှုန်း အော်ပြီးတော့ သဘောမတူရင် မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် လုပ်ကြသောသူများ…………….
Courage says: ကြိုက်တယ်။ လိုသကာပျား မလိုတမာခါးတွေ
Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: ဦးဘတ်လတ်။
ပိတ်သတ်ကြီးတွေ ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် ပုံနဲ့တကွ တင်ပါ့လားးး
တဂျီးလည်း သတင်းစာထဲ ယူသုံးလို့ ရအောင်။
ဇွန်သဉ္ဇာ ချစ်သူများအသင်း ကို အကူအညီတောင်းပြီး
အူးစည် says: ဘာပဲလုပ်လုပ် ဇွန်ကြီးမှန်တယ်။ ဇွန်ကြီးနိုင်တယ်။
တောင်ပေါ်သား says: အင်းးးးး
အင်တာဗျူးတစ်ခုထဲမှာ မဖြေချင့်ဖြေချင်သွားဖြေတဲ့ စာမေးပွဲ တဲ့ ၊ သူ့ပညာအရည်အချင်းကို လေးစားပေမယ့် သူလုပ်နေတာတွေက . . . . ထွီ
ကျုပ်နှမ တူမ ဒါမှမဟုတ် သမီးဆို ရိုက်သတ်လိုက်တာ ကြာပြီ
စကားလုံးတွေ ရိုင်းရင် ခွင့်လွှတ်ပါ
နွယ်လေး နဲ့ ဝေးရမှာလည်း ထည့်တွက်ပါဦးဗျာ…။
kai says: ယူအက်စ်ကို ပညာတော်သင်နဲ့.. တက္ကသိုလ်တခုခုကိုရောက်လာရင်တော့.. အဲလိုပုံတွေရိုက်.. ပေါပေါပဲပဲ.. အလကားလျှောက်တင်မနေတော့ပဲ.. သူ့အလိုလိုပြောင်းသွားမှာပါ…။
အာမခံ..ကြောင်း..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
သူကြီး အာမခံ ရဲတယ်ဆိုရင်
အင်တာနက်ပေါ်မတင်ပဲ ပေါပေါ ပဲပဲ အလကား လျှောက်မတင်ပဲ
သူကြီး တစ်ယောက်တည်း လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားမှာမျိုးလား ဟင် ????
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဘာဗျ
ဟိုအမေရိကားနေ တဲ့ တား ကိုကို ပြောတာပါ…။
မွသဲ ( 17082011 ) says: အလဂါးလျောက်မတင်ဘဲ ပလေးဘွိုင်းကိုရောင်းစားမယ် လို့မြန်းပြောချင်ဒါလားဒဂျီးရယ်
Alinsett@Maung Thura says: ဦးကြောင် စကား ငှားပြောပါမြီ
ဆားချဉ်သီ (သို့မဟုတ်) tea like ယ
ဦးဦးပါလေရာ says: .ဒီပိုစ့်လေးက ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ … အဲလေ.. ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ..
.ပညာသင်စားရိတ်သက်သက် မဟုတ်ပါဘူး… ပညာသင်စားရိတ်တန်ဖိုးက အဓိက မဟုတ်ပါဘူး..
.ဂုဏ်သိက္ခာက အဓိက ပါ…
.မြန်မာပြည်သား လူငယ်တွေ အင်မတန် လေးစား အားကျ တန်ဖိုးထားမယ့် အရာပါ..
.အဲဒါကို ရယူနိုင်သူဟာ လူငယ်တွေ အားကျ အတုယူစရာ သင့်တော်ဖို့လိုပါသဗျာ…….
.ဒီဆုမျိုးဆိုတာ တာဝန်သိရင် တာဝန်ကြီးပါသနော…
.မဆီမဆိုင်ပဲထားပါတော့ – ဥပမာလေး တစ်ခုပြောကြည့်မယ်…
.ရိုးရိုးလူတစ်ယောက် လုံချည်ချွတ်ပြီး လမ်းလျှောက်ရင် အဲဒါ ဘာမှအရေးမကြီးဘူးဗျ (လိုက်တော့မလုပ်နဲ့နော်…)
.အလွန်ဆုံး ခွေးဟောင် ရဲဖမ်း ရုံပဲ….
.တကယ်တော့ လုံချည်ချွတ်ပြီး လမ်းလျှောက်တဲ့ မူးရူးနေသူတွေဟာ နေရာတစ်ကာမှ မမြင်ချင်အဆုံးပဲ….
.ဒါပေမယ့် ပဲမြစ်ကလေး အဲသလိုလုပ်တာတော့ကျုပ်လုံးဝ သဘောမကျ လက်မခံနိုင်ဘူး…
.သူက အထင်ကရ မင်းသား အနုပညာရှင်
.ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့သာ မကြိုက်တာ
.မြန်မာပြည်အရပ်ရပ် နယ်ကြိုက်တောကြိုက် – ဆယ့်သုံးလေးနှစ်သားလေးတွေရဲ့ ဟီးရိုးဗျ
တချို့ကိစ္စတွေက သတိထားပြီး ပြောနေဆိုနေရင်
လိုရာမရောက်ပဲ ဝေ့နေသလိုကြီး ဖြစ်နေရော…။
ဒဲ့ကြီး ပြောချလိုက်ပြန်ရင်လည်း ရိုင်းသလိုကြီး ဖြစ်ပြန်ရော…။
manawphyulay says: အင်း… ဘာမှမပြောတတ်တော့ပါဘူး ဦးဘလက်ရယ်… သူ့ကိစ္စပြုပြင်သွားရင်လည်း ကောင်းသားနော်… မြန်မာမိန်းကလေးတွေအတွက်ပါ သိက္ခာကျစရာ အဖြစ်တွေပါပဲ။
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ချီးမြှင့်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ
naywoon ni says: ကိုဘလက်​​ရေ ခင်​ဗျား မ​ပြောပဲ ချန်​ထားတာများ တစ်​ခုခုရှိ​နေသလားလို့ ။ ဒီပို့စ်​ဖတ်​ရမှ ခင်​ဗျားမှာ စိုးရိမ်​တစ်​ကြီး ​ပြောစရာ တစ်​ခုခု ကျန်​​နေခဲ့သလိုပဲ ။ ကျုပ်​​ စာဖတ်​​နေရင်း အလိုလို သိ​နေသလိုပဲ​နော်​ ။
ကွန်​ဇာ​ဗေးတစ်​များ ကျ​နော်​တို့ရဲ့ သမ​ဒကြီးက ပညာ​ရေးဥပ​ဒေ ​ပြောင်းသင့်​မ​ပြောင်းသင့်​ တိုင်းပြည်​ကို ​သွေးတိုးစမ်းတယ်​လို့ပဲ ​အောက့်​​မေလိုက်​ပါ ။
အလက်​ဇင်းဒါးက ​ဖွေး​ဖွေး မှ​ဖွေး​ဖွေး ဆိုပြီး ခု​တော့ ​ကွေး​ကွေးကြီးကို သ​ဘောကျ​နေဘီလား ။
ကျွန်တော့် ဘက်က တစ်ဘက်သတ် အဖြေတစ်ခုမထုတ်ချင်လို့
လိုအပ်တဲ့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာလေးတွေ စုစည်းပေးလိုက်တဲ့ သဘောပါ…။
အခုပဲ ဇွန်သဉ္ဇာ ဘက်က အသံ ပြောင်းစပြုလာတာကို တွေ့ရပါပြီဗျာ…။
ပညာသင်ဆုအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ထုတ်လိုက်တယ်။
ကိုယ်ကလည်း ဒါကိုတက်မယ်လို့ တက်မယ်လို့ ရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့
ပြောင်းရင်လည်း ပြောင်းလဲ သွားမှာပေါ့။
အခုတော့ ပရိသတ်တွေ တောင်းဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့်
8 Days ဂျာနယ်မှ…။
apolo11 says: ဇွန်သင်ဇာ ကိုမရွေးစေချင်ပါ။
သမတ ပညာသင်ဆုနဲ့ ပညာတော်သင် သွားပြီးပြန်လာရင် အဲ့ဒီပညာနဲ့
နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူကို ပြန်အကျိုးပြုမည့်သူကိုပဲ ရွေးသင့်ပါသည်။
ဇွန်သင်ဇာ သည် အဲ့ဒီပညာနဲ့ နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူကို ပြန်အကျိုးပြုမည့်သူမဟုတ်ပါ။
ရွေးချယ်ခံရလျှင်ပင် သွားသင့် မသင့် သူမ ကိုယ်တိုင် မဆုံးဖြတ်ရသေးပါ။
အကယ်၍ ရွေးချယ်ခံရပြီးမှ မသွားဖြစ်လျင် ကျန်သူများ၏ အခွင့်အရေးကို
black chaw says: @ apolo11;
ဟုတ်ကဲ့ပါ apolo11 ရေ…။
အခုလို ထင်မြင်ချက်လေး ရေးပေးသွားတာ ကျေးဇူးအထူးပါခင်ဗျာ…။
ကျန်သူများရဲ့ အခွင့်အရေးကို ပိတ်ပင်သလို ဖြစ်နေပါမည် ဆိုတာလေးကလည်း
လုံမလေးမွန်မွန် says: နားလည်ထားသလောက်ကတော့ scholar ဆိုတာ တော်နေရုံနဲ့ မရဘူးထင်တယ်.. လူကောင်းဖြစ်မှရမယ်.. စိတ်ဓာတ်..အဆင့်အတန်း အကုန်လုံးပေါ့.. ဇွန်သင်ဇာကို လူကောင်းလို့ မသတ်မှတ်တဲ့အတွက် မရစေချင်ပါဘူးရှင်… သများကို ဂျေဒိုးနတ်စားတယ်ပြောကြလည်း အပြောခံပါမည်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ဂျေဒိုးနတ် စားတယ်လို့ မစွတ်စွဲ ပါဘူးဗျာ…။
ဒီနေရာကနေ ဇွန်သဉ္ဇာ ယူတတ်ရင် ရနိုင်တဲ့
ဇာဇာထက်တောင် အဖေါ်အချွတ်ပုံတွေ လျှော့ရိုက်တော့မယ်လို့
ဆိုတော့ လုံမလေးရဲ့ ကွန်းမန့်က ဇွန်သဉ္ဇာအတွက်
တန်ဘိုးရှိတဲ့ ကွန်းမန့် ဖြစ်မှာပါဗျာ…။
ကထူးဆန်း says: ငိ ငိ …
ဇွန် သဉ္စာ နိုင်ပါသည် ။ အရင်တုန်းက ဇွန် သဉ္စာ ကိုမသိ သူများပင် ယခု သိကုန်ကြပါပြီ။ယခု မှ အမှန်အကန် နိုင်ငံကျော် ဖြစ်သွားပါပြီ။
ထို့ကြောင့် ဇွန် သဉ္စာ နိုင်ပါသည် ။
ရေးဖြေ ဆိုသည် မှာ အမှတ်စဉ် လိုက် ရွေးမည် ဖြစ်သောကြောင့် သူတော်သလို အရွေး ခံ ရမည်သာ ဖြစ်သည် ။ ပြု တ်သွားသူများထက် သူတော် ၍ အရွေးခံ ရ ပါ မည် ။
နုတ်ဖြေ မှာ အကျင့်စာရိတ္တ ၊ ဘယ်လို နေထိုင်ပြု မှုသည် ၊ အဲ့ဒီပညာနဲ့ နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူကို ပြန်အကျိုးပြုမည့်သူ ဟုတ်မဟုတ် ၊ ပြီးတော့ VIP သားသမီး ဟုတ် မဟုတ် စသည် တို့ ပါ အကဲ ဖြတ် ရခြင်းကြောင့် သူ အရွေးခံ နိုင် စရာ အကြောင်း မရှိပါ ။ လွှတ်တော် တွင် လည်း အဖော် အချွတ် ကိစ္စ တင်သွင်း ခဲ့သည် ရှိသောကြောင့် ရွေးချယ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများမှာ ဘယ်လောက် ဇွန်သဉ္စာ ကို တိတ်တိတ်ပုန်း အားပေးသူဖြစ်နေနိုင်သော်လည်း ပေါ်ပေါ်တင်တင်တော့ ရွေး ရဲမည် မထင်ပါ ။
နုတ်ဖြေ လူတွေ့ စစ်ဆေးပြီး မှ ပေးမည့် အခါတွင် သူ အရွေး ခံ နိုင်ဖွယ် မရှိပါ ။ ထို့ကြောင့် သူ မယုတ်မလွန်
ဒီစကား ပြောထားသည် ထင်ပါသည် ။ ဆိုတော့ ဘဘဘလက်တို့ ဆက်လက် အားပေး နိုင်ပါလိမ့်မည် ။ဆက်လက် အားပေးကြပါစို့ ။ ဇွန်သဉ္စာ နိုင်ပါသည် ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ ကထူးဆန်း ;
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ချီးမြှင့်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ ကိုထူးဆန်းရေ…။
ကိုထူးဆန်း အဆိုကို ထောက်ခံပါတယ်…။
မယုတ်မလွန် ပြောထားတဲ့ စကားဆိုတာလေး ကတော့
အမြင်တူနေလို့ ဘီစီ ချီးမြှင့်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ…။
ပို့စ်လေး ဘာလေး ရေးပါဦးလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ကိုထူးဆန်းရေ…။
naywoon ni says: ဈွန်​သင်​ဈာ နိုင်​တယ်​
ဖွဘုတ်​မှာ ပိုဖိုင်းတင်​ရင်​ ပို​တောင်​ပွဲဆူသွားအုံးမယ်​ ။
ကျွန်တော် Like လုပ်မယ်…။
ဗုံဗုံ says: အူးဘလွတ်​ ဒီပို့စ်​ကို အံကြိတ်​တင်​ရမှာ
​ပေါ့​နော်​ အူးဘလက်​နိုင်​ပါတယ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ခင်ဇော် says: https://www.facebook.com/aungmyokyaw.aungmyo.5/posts/1575711036032350
တောင်ပေါ်သား says: နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ပညာသင်ဆုရွေးချယ်သည့် စနစ်သည် နိုင်ငံတကာ ပညာသင်ဆု ရွေးချယ်သည့်စနစ်နှင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည်ဟု Crown Education မှ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်ကျော်ဆန်းက ပြောသည်။
စင်ကာပူ၊ အမေရိက၊ အင်္ဂလန် စသည့် နိုင်ငံများတွင် ပညာသင်ဆု ရွေးချယ်ရာ၌ တက်ရောက်မည့် ကျောင်းဝင်ခွင့် ရပြီးမှသာ အဆိုပါ ကျောင်းဝင်ခွင့် လျောက်လွှာနှင့်အတူ ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သမ္မတ၏ ပညာသင်ဆုရွေးချယ်ရာတွင် ယင်းကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ လူရွေးချယ်ခြင်းကို ဦးစွာပြုလုပ်ပြီးနောက်မှ ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက်ထားရသည့် ပုံစံဖြစ်နေသောကြောင့် ၎င်းက ယင်းသို့ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။
သမ္မတ ပညာတော်သင်ဆု ရွေးချယ်ရာတွင် နိုင်ငံတကာမှ စနစ်အတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက လျှောက်ထားသည့် ကျောင်းသား၏ အရည်အချင်းအမှန်ကို တက္ကသိုလ်များက ကျွမ်းကျင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သဖြင့် တိကျမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ရန် ပိုမိုအထောက် အကူပြုသည်ဟုလည်း ဦးအောင်ကျော်ဆန်းက ဆိုသည်။
၎င်းက ” တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်တွေ လျောက်ထားပေးဖို့ ကျွန်တော်လက်ရှိ ကူညီနေရတဲ့ ကျောင်းသားတွေမှာ သိသလောက်ဆို သူတို့ကို ချိတ်ဆက်ထားတာ မရှိဘူး”ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ သမ္မတ ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရာတွင် ဝဇ္ဇာ/သိပ္ပံဘွဲ့ရများက မဟာဘွဲ့အဆင့် လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ခံထားရသော်လည်း အချို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝဇ္ဇာ/သိပ္ပံဘွဲ့များကို နိုင်ငံတကာ မဟာဘွဲ့အဆင့် မပေးသည်လည်း ရှိသည်။ ယင်းအပြင် ပီအိပ်ချဒီ ဒေါက်တာဘွဲ့တွင်လည်း အစိုးရချင်း မချိတ်ဆက်ပါက အခက်အခဲ ရှိနိုင်သည်ဟုလည်း Crown Education ၏ သမ္မတ ပညာတော်သင်ဆုအတွက် အကြံပြုချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းသို့ ရွေးချယ်မှုပုံစံနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆရာများသမဂ္ဂမှ အထွေထွေ အတွင်းအရေးမှူး ဒေါက်တာ အာကာမိုးသူက ” ကျောင်းတွေကို သမ္မတပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျောင်းအလိုက် ခေါ်တယ်လို့ သိရတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ကျောင်း လျှောက်ထားနိုင် တယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရဘူး။ ဒီဘက်ခြမ်းက လွတ်လိုက်ပေမယ့် ဟိုဘက်ခြမ်းက အရည်အချင်း မပြည့်မီရင် မရပြန်ဘူး”ဟု ပြောသည်။
ဦးအောင်ကျော်ဆန်းကလည်း ” သူတို့ကို ရွေးထားပြီဆိုပြီး စာရွက်နဲ့ လာတဲ့အခါမှာ အဲဒီကျောင်းသားတွေက ဟိုဘက်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်က ကျောင်းဝင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတာ အများကြီး တွေ့ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယင်းအပြင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားအတွက် စစ်ဆေးရာတွင် နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များက လက်ခံသည့် IELTS Test (သို့ ) TOEFL Test ကို တစ်ခါတည်း စစ်ဆေးရန်လိုသည်ဟုလည်း ၎င်းက အကြံပြုသည်။
ပညာတော်သင်ဆုအတွက် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲဖြေဆိုခဲ့သူများအနက် IELTS အဆင့် 6.5 နှင့်အထက် ညီမျှသော Aptis Test အဆင့် ‘C’ ဖြင့် အမှတ်အများဆုံး ရရှိသူ ၁၄၂ ဦးအား ပထမအသုတ် လူတွေ့ စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်ဟုလည်း အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန (အောက်မြန်မာပြည်)က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
IELTS 5.0 နှင့် 6.5 အကြား အဆင့်နှင့်ညီမျှသော Aptis Test အဆင့် ‘B2’ အတွက် ဖြေဆိုသူ ၇၃၆ ဦးရှိခဲ့ပြီး ၁၇၂ ဦးကို ဒုတိယအသုတ် လူတွေ့စစ်ဆေးရန် စာရင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
တတိယအသုတ် လူတွေ့ ဖြေဆိုရမည့် စာရင်းလည်း ထွက်လာပြီဖြစ်ကာ ၅၆၄ ဦး ပါဝင်သည်။
chate chate says: တတိယ Result မှာ ပါလာသည်ဟုကြားပါသည်… ရှေ့စာလုံး z နဲ့ စလို့ နောက်ရောက်တာလား..
အမှတ်အတိုင်းစီတာလား.. ဘယ်လိုစီလဲတော့မသိ…အကယ်လို့ အမှတ်တိုင်းစီတာဆို လူတွေ့မှာရှေ့ နှစ်သုတ်ထက်အမှတ်များမှရမှာ…လူတွေ့ဆိုတာက ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး စိတ်နေစိတ်ထား
အပြုအမူအပြောအဆို အနေအထိုင်တွေကို ဇောင်းပေးစစ်တာများတယ်ဆိုတော့( နောက် psycho test ရောပါလားမသိ..) ရာခိုင်နှုန်းအတော်နည်းမယ်ထင်ပါတယ်။
black chaw says: @ chate chate ;
ဟုတ်ကဲ့ပါ chate chate ရေ…။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ကိစ္စမို့
ခေတ်မီသွားအောင် ဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့ သဘောပါဗျာ…။
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျ…။
နောက်လည်း အားပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ…။
manawphyulay says: စိမ်းခက်စိုးရဲ့ ဝေဖန်ချက်လေးပါ
ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်က ဇွန်သဉ္ဖာ စကော်လာရတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အပုတ်ချပြောဆိုတာတွေ၊ ကာတွန်းတွေ ဖတ်ရတယ်။ အလုပ်မအားလို့ ဖုန်းလေးဖွင့် လိုက်ဖတ်ပြီးပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။
စိတ်မကောင်းဖြစ်တာက ဒီလိုပါ။ ဇွန်သဉ္ဖာဆိုတဲ့ ဖော်ချွတ်မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဟာ ရုပ်ထွက်၊ အသံထွက် ဂုဏ်သိက္ခာအခြေမလှတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့က စီစဉ်တဲ့ပညာသင်ဆုသမ္မတစကော်လာရတယ်ဆိုတော့ အားလုံးက အစိုးရကိုကလော်ချင်တာနဲ့ သူမနဲ့နှိုင်း၊ သူမကို ကြားခံထားပြီး အစိုးရကို ဆဲကြ၊ ကလိကြ၊ လှောင်ကြတာပါ။
အခြေအနေကလည်း ကျောင်းသားအရေးအတွက် စိတ်မကောင်း၊ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့
အချိန်ဆိုတော့ အစိုးရကို မုန်းတဲ့ စိတ်ဟာ အလွတ်တမ်း၊ အားမနပဆဲဆိုလို့ရတဲ့
သူမ ကနေတဆင့် အစိုးရကို ၀ိုင်းလှောင်ခဲ့ကြတော့ ကြားကနေ မိန်းမတစ်ယောက်
ရဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စော်ကားမိသလိုဖြစ်သွားစေတာ
ကို သတိထားမိလာပါတယ်။(ပြောသူတွေတော့ ဘယ်လိုနေတယ် မသိပါ။ ကျနော်က
တော့ လိုက်ဖတ်ရင်းကို ရှက်မိပါတယ်။)
မှန်ပါတယ်။ ဇွန်သဉ္ဖာဟာ အဖော်အချွတ်(တချို့အသုံး ဆက်ဆီမော်ဒယ်ပေါ့)မော်ဒယ်
တစ်ယောက်ပါ။ နောက် ပညာလိုလားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ ခေတ်ကြီးက
မကောင်းလို့သော်လည်းကောင်း၊ ၀ါသနာပါလို့သော်လည်းကောင်း၊ အသက်မွေးဝမ်း
ကြောင်းမှုအရသော်လည်းကောင်း သူ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကို ထိုသို့ ရွေးချယ်ခဲ့
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမတစ်ယောက်၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူဝါသနာပါရာ၊
သူယုံကြည်ရာ၊ သူ့အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် သူကြိုက်တဲ့ စားဝတ်နေရေးအလုပ်၊
အတတ်ပညာသင်ကြားခွင့်ကို သူ့မှာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ကျနော်တော့ယုံကြည်
ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လုပ်ဖို့ကိုလည်း အားလည်းပေးပါတယ်။
သူဟာ ဖော်ချွတ်မော်ဒယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့မှုဟာ ဘယ်သူ့ဘ၀ကိုမှ ထိခိုက်ပျက်ဆီးမ
သွားဘူး။ ဘယ်သူ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမှ မထိခိုက်သွားဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ သူမရဲ့
အလုပ်အကိုင်းကို အလွတ်ကြီး စော်ကားခွင့်မရှိသလို၊ သူမရဲ့ ပညာသင်ကြားခွင့်ကို
လည်း အသိအမှတ်ပြုပေးရမှာပါ။ အားလည်း အားပေးရမှာပါ။
၂၀၀၄-၅ ၀န်းကျင်လောက်က ထင်ပါတယ်။ စင်္ကာပူကနေ အမေရိကမှာ ပညာတော်သင်
သွားတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတစ်ဦးဟာ ပလေးဘွိုင်းမဂ္ဂဇင်းလင့်တွေနဲ့ ချိတ်မိပြီး တပြိုင်နက်
တည်းအကြာကြီးလိင်အဆက်ဆံခံနိုင်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်တာမှာ ယောင်္ကျား၁၀၀ကျော်နဲ့ တောက်
လျောက်လိင်ဆက်ဆံပြီး ဗိုလ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ကတော့ သူမနေ
တဲ့အိမ်ကို စင်္ကာပူကလူတွေက တိုင်းပြည်သိက္ခာကျအောင်လုပ်လို့ဆိုပြီး ၀ိုင်းခဲနဲ့ထု၊ ၀ိုင်းရှုံ့
ချလို့ တစ်မိသားစုလုံးခြေရာဖျောက်ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ (ဒါတောင် စင်္ကာပူတိုင်းမ်းသတင်း
စာက နှစ်စဉ်ထင်ရှားသူများမွေးနေ့တွေမှာ သူမရဲ့ မွေးနေ့ကိုလည်း ထည့်သွင့်ဖော်ပြပေးတာ
ပြောချင်တာက ဇွန်သဉ္ဖာဟာ တကယ်ပညာချွန်တဲ့ အမျိုးသမီးလေးဆိုရင် ဘယ်စကော်
လာကိုလျှောက်လျှောက်ရမှာပါ။ ရခွင့်လည်းရှိပါတယ်။ သူ့အသက်မွေးမှု၊ သူ့ရွေးချယ်
ထားတဲ့ အလုပ်ကို ကျောင်းကလက်မခံဘူးဆိုရင် ကျောင်းအုပ်ချုပ်သူ၊ ပညာတော်သင်
ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီက ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုစဉ်းစားရမှာက သမ္မတ
ပညာတော်သင်ဆုကိုလက်ခံတဲ့ ကျောင်းတွေ၊ အစိုးရတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ နောက်ကွယ်
ကရည်ရွယ်ချက်ကရော ဇွန်သဉ္ဖာရဲ့ တင်ပါးလောက် ရှင်းလင်းပြောင်တင်းရဲ့လားလို့
ကျနော်တို့ မေးလိုက မေးလို့ရပါသေးတယ်။
ကျနော့်မှာ ကိုးတန်းတုန်းက မိုး(နာမည်အရင်းမဟုတ်ပါ)ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းမ တစ်
ယောက်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဆယ်တန်းရောက်တော့ မိုး ကျောင်းကထွက်သွားပြီး ဆံပင်ညှပ်
ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အလုပ်ဝင်သွားပါတယ်။ တခြားမိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့၊ မိဘ
တွေက မိုးနဲ့ ပေါင်းတာကို တားမြစ်လာပါတယ်။ ညီအမ နှစ်ယောက်သာရှိတဲ့ မိသားစုဘ
၀မှာ စားဝတ်နေရေးဆိုတဲ့ မုန်တိုင်းကို အမကြီးဖြစ်တဲ့ မိုးက ရင်ဆိုင်ရတာပါ။ ဒါနဲ့ မိုးဟာ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီတုန်းက ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာလုပ်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ
လူတွေ အထင်သေးစရာ အသက်မွေးမှုအတန်းအစားတစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခေတ်လည်း
ဖြစ်နေတာကြောင့်ရယ်။ သူလုပ်တဲ့ဆိုင်ကလည်း စပွန်ဆာမကင်းတဲ့ ဆိုင်ရှင်အမျိုးသ
မီးကြီးပိုင်တဲ့ဆိုင်မို့ မိုးလည်း အဲ့ဒီစာရင်းထဲဝင်သွားတယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မိုးနဲ့ အဆက်အသွယ်မပျက်ရှိခဲ့တာကတော့ ကျနော်နဲ့ နောက်သူငယ်ချင်း
ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ပါ။ ကျနော်တို့ကလည်း မိုးကိုခင်တာရော၊ သူဆို့ဆံပင်
ညှပ်ဆိုင်က မိန်းကလေးတွေနဲ့ ယောင်္ကျားလေးသဘာဝ ပရောပရီလုပ်ရတာကြောင့်
နောက်ပိုင်း ကျနော်နဲ့ သူငယ်ချင်းက စင်္ကာပူနဲ့ မလေးကို နှစ်နှစ်လောက်အလုပ်ထွက်
လုပ်၊ ပြန်လာတော့လည်း ကိုယ့်ရပ်တည်မှုနဲ့ကိုယ် လုံးပန်းရင်း မိုးကိုလည်း မေ့မေ့ပျောက်
ပျောက်ပါ။ တစ်နေ့ရပ်ကွက်ထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အမှုဖြစ်ပြီး အင်းစိန်ဘက်
မှာ တရားရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ သူ့ဘက်က ရှေ့နေလိုက်ပေးတဲ့သူဟာ မိုးဖြစ်နေပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့မှ မိုးဟာ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာ ၀င်လုပ်ရင်းဆယ်တန်းဖြေ၊ ပြီးတော့ သူဝါသနာ
ပါတဲ့ ရှေ့နေအလုပ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတာ သူငယ်ချင်းတွေရော၊ ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေ
ပါ သိလိုက်ရတာပါ။ မိုးကတော့ အေးဆေးပါ။ ခုချိန်ထိလည်း ရှေ့နေအလုပ်နဲ့ အသက်
မွေးနေတုန်းပါ။ (အဲ့ဒီလို ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းရုန်းကန်နေတဲ့ မိန်းခလေးတွေ၊ အမျိုးသမီး
ဇွန်သဉ္ဖာအကြောင်းပြန်သွားရအောင်။ အဲ့တော့ ပညာသင်ဆုရတဲ့ ဇွန်သဉ္ဖာကို ၀ိုင်းနှိမ်
မယ့်အစား ဇွန်သဉ္ဖာကို တခြားပညာသင်ဆုပြောင်းလျှောက်ဖို့ ၀ိုင်းတောင်းဆိုသွား၊ ပ
ညာပေးသွားတာမျိုး မလုပ်သင့်ဘူးလား။ ဒီလိုမှ ပြောလို့မရရင်လည်း သူ့ရွေးချယ်မှုနဲ့သူ
လူ့လွတ်လပ်ခွင့်အရ သူမ ရွေးချယ်မှုကို ကျနော်တို့အသိအမှတ်မပြုနိုင်ဘူးလားလို့ ကျ
နော်စဉ်းတော့ စားမိပါတယ်။ အနည်းဆုံး လှစ်လျှူရှုထားလိုက်မယ်။
ဖော်ချွတ်မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်၊ ကျနော်
တို့လက်ခံထားတဲ့ မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်ကို ဘာစံနဲ့တိုင်းသလဲလို့ ပြန်မေးရမှာ
ဖြစ်သလို၊ အဲ့ဒီစံနဲ့ ညီညွတ်သော မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်ယောက်များ ခုခေတ်ကြီးမှာ
ရှိခဲ့လျှင်လည်း ဆွဲထုတ်ပြခဲ့ကြပါလို့ ထပ်မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မိန်းမတွေ ကောင်း
တယ်၊ မကောင်းဘူးပြောနေတာကိုက ကျနော်တို့ရဲ့ လူသားဆန်မှု၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာပြည့်
၀မှုကို အလေးထားရမှုတွေကို ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် ချိုးဖောက်မိနေပြီဆိုတာလည်း မမေ့ဖို့
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာရှင်သန်ခွင့်၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုတာ အယုတ်အ
လတ်အမြတ်မရွေးသော မိန်းမတိုင်းမှာ ခံယူခွင့်၊ ရယူခွင့်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသ
မီးများနေ့မှာ အနည်းဆုံးစတေးတပ်လေးတစ်ခုလောက်ရှယ်ခဲ့တဲ့သူဟာ အစိုးရကို
မုန်းတီးစိတ်နဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကို မျက်
ကွယ်ပြုသလိုဖြစ်နေရင်တော့ ခင်ဗျားသိထားတဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုတာကို ပြန်
ကျနော်တို့ အစိုးရလုပ်ရပ်တွေကို လက်မခံနိုင်ဘူး။ တရားမမျှတဘူးထင်ရင် သူတို့ကို
တိုက်ရိုက် ရင်ဆိုင်လိုက်စေချင်ပါတယ်။ ပညာရေးဥပဒေကို စည်းကမ်းကျနစွာတောင်းဆို
ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေလို၊ လစာနဲ့ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးအတွက် ရဲရဲရင့်ရင့်တောင်း
ဆိုခဲ့ကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေလို၊ အသက်ပါပေးပြီး တောင်းဆိုသွား လယ်သူမကြီးလို
ရင်ဆိုင်ကြစေချင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အရှက်၊ သိက္ခာ၊ လွတ်လပ်ခွင့်
ကို နင်းပြီးတော့ (မတော်တဆနင်းမိတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့) တိုက်ပွဲမ၀င်
တကယ်တော့ ကျနော်တို့ လုပ်ရမှာက ဇွန်သဉ္ဖာတင်မကဘူး၊ အဲ့ဒီ့ သမ္မတ စကော်လား
ရှစ်ရတဲ့ သူတွေအားလုံးက ကျောင်းသားတွေကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတဲ့အတွက် စကော်
လာကို လက်မခံပဲ တညီတညွတ်တည်းပြန်အပ်အောင် ၀ိုင်းဝိုင်းစည်းရုံးသင့်တာမဟုတ်
ခင်ဇော် says: @ စိမ်းခက်စိုးးး
အရှက် သိက္ခာ လွတ်လပ်ခွင့် ကို ငဲ့ပြီး မပြောတော့ပါဘူးးး
ဟုတ်ကဲ့ပါ မနောဖြူ ရေ…။
ဇွန်သဉ္ဇာကို တစ်ဖက်သတ် ရှုတ်ချထားခြင်း မဟုတ်ကြောင်း
ပို့စ်ကို သေချာဖတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်ဗျာ…။
အခု စိမ်းခက်စိုး ဆိုတဲ့ ကလေးမ (လို့ထင်ပါတယ်)
ဇွန်သဉ္ဇာ အပါအ၀င် စကာလားရှစ်ရရှိသူတွေကို လက်မခံအောင် စည်းရုံးဖို့
အဲဒါကြီးကတော့ နိုင်ငံရေးပါလာလို့ တားတားတို့လည်း မလျှောက်တတ်ကြောင်းပါဗျား…
မြစပဲရိုး says: ဒါက ဘာဆိုင်လို့ လဲ။
ဆန္ဒပြတဲ့ သူ တွေ ကို ထောက်ခံဖို့အတွက် ကိုယ့် ဘဝ တက်လမ်း ကို ဖျက်ရတော့ မှာလား။
မြစပဲရိုး says: ဟိုးတစ်ခါ အင်တာဗျူး မှာတုန်းက သူ့ဘဝ ရေရှည် အတွက် မဖြစ်ခင် ပညာရေး ကို လုပ်ဖို့ ဆို။
အခုတော့ အမေ က တွန်းလို့ တဲ့လား။
အဲလို မှန်ရင်တော့ အမေ့ ခမျာ သနားပါတယ်။
သူ့သမီး ကို အဲဒီ ဘဝ က နေ ဆွဲထုတ် ချင်နေတယ် ထင်ပါ့။
တကယ်တော့ ရပ်သင့်ချင် ရပ်လိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ဒါထက် ကထူးဆန်း ရဲ့ အဖြေ ကို ကျွန်မ လဲ အတော် သဘောကျပါတယ်။
စကာတင် မှာ ပါ တဲ့ သူ တွေ က တကယ်တော် တဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ပညာပိုင်း မှာ နာမည်ကောင်း ရထားသူ တွေ ပါ မယ်လို့ လဲ မျှော်မှန်းပါတယ်။
သူတို့ က ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း နဲ့ အလုပ်များ နေမဲ့ မော်ဒယ်မလေး ထက် လဲ သာသင့်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မ ကတော့ The best man win ကို သဘောကျ ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အမေ တွန်း လို့ လုပ်ရတဲ့ သူ ဆိုရင်တော့ မိုးပျံပြီး သူများက လိုက်မမှီ အောင် တော် လဲ မပေးသင့်ပါ။
ဒါ နဲ့ ဘဲ ပွဲ ပြီး သွားသင့်ပါတယ်။
Courage says: ဟိုလေ နုမော်ဒယ် တစ်ယောက်က ပညာတတ်ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလား ဆိုတာကိုတော့ မေးလဲမေးချင်တယ် မေးလဲမမေးရဲ့ဘူး။
သူ့ကို မရွေးချယ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ အရည်အချင်း ပြည့်မှီနေသူ လူတစ်ယောက်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ မတရားနိုင်ထက်စီးနင်းပြုချင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါဟာ လူအခွင့်အရေးကို ချိုးဖေါက်တာဖြစ်သလို ဒီမိုကရေစီဆိုတာနဲ့ လားလားမှ မဆိုင်တဲ့အတွေး။
ပြောရရင်တော့ တွဲလျက်ရှိနေတဲ့ သူ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေဖြစ်တဲ့ အဖေါ်အချွတ်မယ်နဲ့ ပညာတော်သင်ဆုရ ဆိုတာကို ခွဲပြီး မြင်စေချင်တယ်ဗျာ။
Wow says: နာလဲ အာ့ပြောချင်နေတာ မပြောရဲလို့… ဟီးးး
ပါစင်နယ်နဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကို ခွဲမြင်ဂျဇမ်းးးးးဘာာာာာာာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1680
အောင် မိုးသူ says: သွသူ လုပ်ချင်တာလုပ် လူတွေ့မှာတော့ အောင်မယ်မထင်။
ပြောကိုမပြောချင်တော့ဘူး ပြောကို မပြောချင်တော့ဘူး။
အောင် မိုးသူ says: ဇွန်ကြီးကို ဝန်းရံကြ ဒုန်း ဒုန်း ဒုန်း :D
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: မည်​သို့ပင်​ဆို​စေကာမူ ဇွန်​ကြီးသည်​ ဇွန်​ကြီးဖြစ်​သည်​
kai says: အဲလောက်ကြီးမားထွားကျိုင်းနေတာကြီးနဲ့.. ယူအက်စ်ကောလိပ်ကျောင်းသူဆို.. ၀ိုင်းဟားခံရမယ်.. ထင်..။
တခြားတနည်းနဲ့.. နာမယ်ကြီးချင်ကြီးသွားမပေါ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဘားမန်း​တေ တိုင်​ပတ်​​နေတာ အဲ့ကိစ္စပဲ
​တော်​တာ နဲ့ ​ဖော်​တာနဲ့ ပညတ်​ ပရမတ်​မကွဲဘူးရယ်​
​ဖော်​တဲ့လူ ​တော်​ခွင့်​မရှိသလား ​မေးရမလို
​တော်​ပီး ​ဖော်​တဲ့လူကျ ဘယ်​အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲထည့်​ရမတုန်း ပြန်​​မေးရမယ့်​အတိုင်း
က​လေးမက သူ့အလှ​ကော အုံး​နှောက်​ပါ ခင်းကျင်းပြပီး
မနှစ်​သက်​ရင်​ သ​ဘော အဲ့လိုလူရှားတယ်​ဆိုတာ ပါပဲ
အင်​မတန်​လှတဲ့​ဒေ၀ီတဦး မြင်​ဖူးရဲ့ အ​ရေးအ​ကြောင်းဆို ​မေးခွန်းနဲ့အ​ဖြေ ​ပေါက်​ပန်း​လေးဆယ်​​တွေထွက်​လာတာရယ်​
.. Miss Universe တွေမှာ.. အလှတခုထဲနဲ့မပြီး..
အားရင်.. ကြုံရင်.. မြန်မာ့ဂဇက်အလှပန်းတယောက်ကို.. တလစာ… တာဝန်ယူပေးပါလား…။
တကယ်တော့.. အခုသင်္ကြန်မှာ.. သင်္ကြန်မယ်လှလှကို.. ပိတောက်ပန်းနဲ့.. လိုချင်တာ…။ Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: အဲလို ထွားတာဂျီးကြတော့ အမည်းနဲ့ပဲတွေ ကြိုက်သဗျ..။